FLORIDA SY CRACKER CUR DOG FAMPAHALALANA SY SARY - ALIKA
Florida sy Cracker Cur Dog Fampahalalana sy sary
'A Florida Cracker Cur dia alika henjana. Any Florida, alika omby sy kisoa ity alika ity izay ampiasaina amin'ny fiompiana omby amin'ny hafanana be any amin'ny tropika izay miasa amin'ny alim-pito miaraka amin'ny koboziny. Manana fifehezana tena tsara izy ireo, tsy mivadika amin'ny toeram-pambolena sy ny asany. Nanjary tsy fahita firy ny ozona masiaka - noho ny fahaverezan'ny indostrian'ny tany sy omby dia nihena ny filana alika omby. Manana ny tenako aho avy amin'ny zanak'omby Cowboy 70 taona. Ny vavy, ny reniny, dia iray amin'ireo alika tsara indrindra tamin'ny taonany rehetra, noho izany dia andefasako ity sary misy azy ireo mena sy alika mpihetsiketsika. Mavo amiko, fa izany no lazain'izy ireo, alika milelalela .... Ny alika dia vehivavy 30 ka hatramin'ny 40 lahy. '
Alika omby any Florida
Ny Florida Cracker Cur dia tsy nambolena ho an'ny endrika ivelany, fa noho ny fahaizany miasa.
mini pincher sy chihuahua mifangaro
Tsy alika mpilefitra sy mora tohina ity. Miaraka amin'ny hamafiny sy herim-po hiadiana amin'ny saka tezitra be sy be dia be, ireto Kurs ireto dia nianatra ny ho tapa-kevitra sy tsy ho kivy. Matetika mangina eny an-dàlana izy ireo, manao alika mpiambina tsy miova, nefa azo antoka fa tsy mety amin'ny faritra ambanivohitra, izay tsy misy antso hiasa. Miovaova arakaraka ny fihenjanana ny fahaiza-mamakivaky, saingy manana orona ampy hanarahana lalao izy ireo ary maro no manana fahaizan'ny hazo. Ny tsipika sasany dia nompiana ho an'ny alika hazo ary ny hafa kosa ho an'ny baying. Ity lalao goavambe goavambe ity, Raccoon ary mpihaza squirrel dia vonona ny hiatrika hareza na vorona mpihaza tezitra rehefa voahidy. Maniry mafy ny hampifaly ny tompony izy. Tena miaro ny fananana sy ny fianakaviana tsy misy tompony izay manjakazaka noho izy, dia mety hiaro tena loatra. Ny Florida Cracker Cur dia nalaza noho ny fahasahiany. Ity alika mpihaza ity dia hisambotra omby adala eo amin'ny orona ary hihazona ny tanany na dia amin'ny bera aza rehefa atahorana. Ny tanjona amin'ny fampiofanana ity alika ity dia ny hahatratrarana ny toeran'ny mpitarika entana. Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany. Rehefa miaina miaraka amin'ny alika isika olombelona dia lasa fonosin'izy ireo isika. Ny fonosana iray manontolo dia miara-miasa amin'ny mpitarika tokana. Voafaritra tsara ny tsipika ary apetraka ny fitsipika. Satria alika dia mampita ny tsy fahafaliany amin'ny mimonomonona ary amin'ny farany manaikitra, ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Ny olombelona no tokony hanapa-kevitra fa tsy ny alika. Izay no fomba tokana ahafahan'ny fifandraisanao amin'ny alikao hahombiazana tanteraka.
Ny Florida Cracker Cur dia tsy atolotra ho an'ny fiainana an-trano. Izy io dia namboarina ho an'ny asa ary ho sambatra indrindra amin'ny asa tokony hatao.
volamena retriever anglisy mastiff mix
Rehefa tsy miasa izy dia mila raisina isan'andro io karazany io mandeha lavitra na jogging.
Tokony ho 12 ka hatramin'ny 16 taona
Ny volo fohy amin'ity Cur ity dia mora taovolo. Indraindray borosy sy borosy hanala volo maty sy malalaka. Mandrosoa raha tsy ilaina, satria ny fandroana dia afaka manamaina ny hoditra, miteraka olana amin'ny hoditra. Tazomy mba tsy ho be volo be ny lakandranon-tsofina ary hokapohina ny rantsan-tongotra.
Avy any Florida, tena alika miasa io. Ny alika Florida / Cracker Cur dia tsy namboarina mba hijery, fa ny fahaizany miasa. Izy io dia mazàna lehibe kokoa sy mavesatra kokoa noho ny ozona hafa, ampifanarahana amin'ny honahona ary ampiasaina ho alika omby sy kisoa. Izy io dia miara-miasa miaraka amin'ireo cowboy-ny. Cowboys maro no milaza, 'Ny omby mahomby efa zatra mahay dia mendrika ny asan'ny mpiandry omby maro.' Ny alika tahiry voalohany dia nentin'i Hernando de Soto tany Florida tamin'ny 1539. Ireto alika ireto dia nampiasaina hanangonana omby. Rehefa nandositra ny omby dia anjaran'ny alika ny mamerina miverina miverina ny omby ary mamindra azy io miaraka amin'ny sisa amin'ny omby. Ny alika sasany dia mihazona omby amin'ny orona, sofina na tongotra mandra-pahatongan'ny omby ary omena marika ireo dia antsoina hoe 'Catch Dogs'. Rehefa tsy niaraka niasa tamin'ny ombivavy ireo alika dia nampiasaina ho alika fiambenana sy mpiambina ny fianakaviana ao an-trano. Nandray anjara lehibe tamin'ny fiainan'ny mpiompy izy ireo.
pitbull sy ny mainty laboratoara Mix
sary Amerikana pitbull terrier
pitbull amerikana afangaro amin'ny mpampijaly
collie sy ny lehibe Pyrénées Mix